Dowlada Soomaaliya oo xirtay wargeyska Xog Ogaal, xabsigana dhigtay tifaftirihii - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowlada Soomaaliya oo xirtay wargeyska Xog Ogaal, xabsigana dhigtay tifaftirihii
October 17, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Dowlada Soomaaliya oo xirtay wargeyska Xog Ogaal, xabsigana dhigtay tifaftirihii. [Graphic: Puntland Mirror]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa xiray wargeys sidoo kalena xabsiga dhigay tifaftirihii wargeyska, sida shalay oo Axad ahayd ay sheegeen ururka suxufiyiinta Soomaaliya.
Ciidamada sirdoonka ayaa habeenimadii Sabtida weeraray xafiisyada Xog Ogaal, iyaga oo qaatay kumbuyuutaradii iyo kaamirooyinkii, waxayna xireen tifaftirihii Cadi Aadan Guuleed.
“Tani waxay calaamad u tahay amaanka dowlada oo sii xumaanaya iyo dhibaatooyinka wariyaha madaxa-banaan,” Sidaa waxaa yiri Cumar Faaruuq Cusmaan, oo ah xoghayaha ururka suxuufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ.
Ma cada sababta loo xiray Guuleed, balse ururka ayaa sheegay in ay tahay markii kowaad oo ay dowlada ku kacdo fal kasoo horjeeda wargeyska, oo la asaasay sanadkii 1991-dii.
Haayadaha Soomaaliya ayaan saxaafada ugu yeerin in ay ka jawaabaan waxyaabaha lagu eedeeyo kahor inta aan la xirin. Saraakiisha amaanka ayaa mar walba saxaafada kula kaca xiritaan iyo hanjabaado marka ay tabiyaan warar iyaga kasoo horjeeda.
Soomaaliya oo tan iyo 1990-kii ku jirtay xasilooni daro, ayaa kamid ah dalalka ugu horeeya ee ay warbaahinta ka howlgasho.
Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab, ayaa sidoo kale bartilmaameedsata suxufiyiinta, ugu yaraan 32 suxufi ayaa lagu dilay gudaha Soomaaliya tan iyo 2010 ilaa 2015, sida ay sheegtay guddiga daryeelka suxufiyiinta ee CPJ.
January 30, 2017 Soomaaliya oo markeedii ugu horeysay dood u qaban doonta musharixiinta madaxweynaha
Amiirka Kuweyt oo kala diray baarlamaanka
Agaasimaha cusub ee isbitaalka Garoowe Dr Xabiibo Nuux Ismaaciil oo xafiiska la wareegtay
Garoowe-(Puntland Mirror) Agaasimaha cusub ee isbitaalka Garoowe Dr Xabiibo Nuux Ismaaciil ayaa maanta oo Sabti ah xafiiska la wareegtay. Munaasabada xil-wareejinta oo lagu qabtay isbitaalka Garoowe ayaa waxaa kasoo qeybgalay wasiirka caafimaadka dowladda Puntland Jaamac [...]